Meizu M6S oo wata 4 iyo 6GB oo RAM ah wuxuu shahaadada ku helay TENAA | Androidsis
Markii la bilaabay Meizu M6S oo leh 3GB RAM bishii Janaayo ee sanadkan, Shirkadda Aasiya waxay damacsan tahay inay ku darto buugeeda laba nooc oo leh awood weyn oo RAM ah. Tani waxay sabab u tahay caddeynta ay TENAA, jaangooyaha Shiinaha iyo xaqiijiyaha, ay siisay laba moodal oo, in kasta oo ay wataan qeexitaanno farsamo oo isku mid ah iyo astaamaha nooca horay loo sii daayay, ay la imaan doonaan 4GB iyo 6GB RAM Kuwani waxay hoos yimaadaan magaca moodeelka 'M712Q-B'.
Tani waxay umuuqataa inay sabab u tahay guusha iibka ee Meizu M6S ay heshay tan iyo markii la bilaabay., marka lagu daro rabitaanka shirkaddu inay hagaajiso moobiilkan oo leh karti, iyo xitaa intaas ka sii badan iyadoo aan wax laga beddelin processor-ka ama faa iidooyinka kale ee ay hore u leedahay. Waan kuu balaarinay!
Marka loo eego waxa ay TENAA noo sheegto, Meizu M6S wuxuu ku imaan doonaa labo nooc oo cusub, mid leh 4GB RAM iyo mid kale oo leh 6GB taas oo, labada xaaladoodba, waxaan ka heli doonnaa nooc leh 64GB oo ah xasuusta gudaha oo lagu ballaarin karo kaarka microSD, iyo mid kale oo leh awood dheeri ah oo ROM ah oo ah 128GB sidoo kale waa la ballaarin karaa Tani waxay isbeddeleysaa marka loo eego 32 iyo 64GB oo ah nooca asalka ah ee 3GB RAM uu na siinayo.
Dhinaca kale, Sida qeexitaannada kale iyo astaamaha, wax waliba sidooda ayey ahaanayaan. M6S-kan cusub wuxuu ilaalin doonaa isla shaashadda 18-inch HD + 9: 5.7 oo lagu xallinayo 1.440 x 720 pixels, isla processor Exynos 7872 ah, isla 3.000mAh batariga aan laga saari karin oo lagu taageerayo 18W xawaare degdeg ah, isla kamarad dambe oo ah 16 megapixels iyo isla shiddada sawirka hore ee 8MP. Maxaa intaa ka badan, Waxay sidoo kale leeyihiin isla nidaamka qalliinka Android Nougat oo leh lakabka qaabeynta Meizu's Flyme 6.2 OS.
Ugu dambeyntiina, waxaa lagu sii deyn doonaa xulashooyin isku midab ah oo 6GB RAM Meizu M3S uu sameeyay: Dahab, Matte Madow, Qalin, iyo Buluug.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Meizu M6S oo wata 4 iyo 6GB oo RAM ah wuxuu shahaadada ku helay TENAA